Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahantany » Firenena iray misy American Travel amin'ny isa firaketana ary tsy misy fanontaniana apetraka
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Hawaii Travel News • Other • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny fizahantany • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Firenena iray misy American Travel amin'ny isa firaketana ary tsy misy fanontaniana apetraka
Novambra 30, 2020
Mandia fotoan-tsarotra ny fizahan-tany any Torkia
Tsy olana ny manidina avy any Etazonia na Russia mankany Torkia. Maro amin'ireo sidina Turkish Airlines avy any am-bavahadin'i Etazonia no miala amina entana betsaka. Satria samy tsy miraharaha izany na ny amerikana na ny mpanoratra tiorka.
Ny fahazoana implant nify na volo no antony ofisialin'ny mpitsidika amerikana sy rosiana marobe, misy tolotra toa izany any amin'ny Torkia.
Nisy mpanao gazety eTN vao avy nanidina avy tany Etazonia nankany Torkia ary nijanona 2 herinandro dia niverina ary tsy nanontaniana momba ny mari-pana sy ny zavatra tsapany.
Ny United Airlines dia nanontany azy tany Honolulu tamin'ny sidiny nankany Chicago momba ny COVID. Raha vao tany Chicago dia tsy nisy intsony ny fanontaniana.
Tamin'ny sidina niverenany dia nojereny ny kitapony tany Istanbul hatrany Los Angeles tamin'ny sidiny tamin'ny Turkish Airlines mankany Munich sy United Airlines mankany San Francisco ary hatrany Los Angeles. Tsy nisy nanontany azy ny zavatra tsapany. Tsy navelan'ny manampahefana Alemanina hinto ho an'ny firenena izy satria nanidina avy tany amin'ny firenena tandindomin-doza (Torkia) nankany amin'ny firenena tandindomin-doza (USA)
Niditra tao amin'ny United Airlines tany Munich izy ary tsy nisy fanontaniana ary namakivaky ny fifindra-monina sy ny fadin-tseranana tao anatin'ny 2 minitra. Tsy ilaina ny fitsapana COVID,
Mety hanazava ny antony mahatonga ireo mpitsidika voalohany ao Torkia avy any Etazonia sy Russia amin'izao fotoana izao.
Istanbul dia mbola tanàna be olona ihany. Mihidy izao ny bara amin'ny faran'ny herinandro, saingy misy hatrany ny fanilikilihana marobe, ary polisy maro be no manana maso jamba be noho ny antony.
Miroso ny fizahan-tany any Torkia ary tian'ireo mpitsidika ny mandeha any amin'ny firenena izay tsy misy ferana mihitsy. Aza manahy ny hisaron-tava amin'ny bisy fitsangatsanganana.
Ny hany maso manokatra dia ny manidina ity sidina farany ity avy any Los Angeles mankany Honoluluy. Fitsapana COVID-19 no takiana ary tsy mety mihoatra ny 3 andro. Na izany aza, ny fitsapana toy izany dia tena tsy azo atao. Nahavita fanandramana ny mpitati-baovao nataonay tamin'ny fandehanana tany amin'ny fivarotam-panafody tsy nisy fanendrena, saingy herinandro ny vokany vao afaka niverina. Nangatahina tany Honolulu izy hanaraka karokantine 14 andro.
Nanova ny fomba nitaterany ny aretina COVID-19 isan'andro i Torkia, nanamafy ny zavatra efa ahiahiana hatry ny ela ny vondrona mpitsabo sy ny antoko mpanohitra - fa ny firenena dia miatrika trangana tranga mampivarahontsana izay mandreraka haingana ny rafitra ara-pahasalamana Tiorka.
Nandritra ny endrika nifanatrika dia nanohy ny fitaterana ny fitsapana rehetra ny fitsapana ny coronavirus ny governemanta filoha Recep Tayyip Erdogan tamin'ity herinandro ity - tsy ny isan'ny marary notsaboina noho ny soritr'aretina ihany - no nanosika ny isan'ireo tranga isan'andro mihoatra ny 30,000. Miaraka amin'ireo angona vaovao, ny firenena dia nitsambikina avy amin'ny maha-iray amin'ireo firenena tsy voa mafy indrindra tany Eropa ka lasa iray amin'ireo voa mafy indrindra.
Tsy nahagaga izany ny Fikambanana ara-pitsaboana Tiorka, izay efa nampitandrina nandritra ny volana maro fa ny tarehimarika teo alohan'ny governemanta dia manafina ny fahasarotan'ny fiparitahana ary ny tsy fahampian'ny mangarahara no nahatonga ny firongatra. Nanamafy hatrany anefa ny vondrona fa mbola ambany ny tarehimarika avy amin'ny minisitera raha ampitahaina amin'ny tombam-bidy vaovao farafaharatsiny 50,000 isan'andro.
Tsy misy firenena afaka mitatitra isa marobe momba ny fiparitahan'ny aretina satria maro ny tranga asymptomatika no tsy voamarika, fa ny fomba fanisana teo aloha dia nahatonga an'i Torkia ho hita fa tsara raha oharina amin'ny fampitahana iraisam-pirenena, miaraka amin'ny tranga vaovao isan'andro ambanin'ny tatitra any amin'ny firenena eropeana, anisan'izany i Italia. Angletera sy Frantsa.
Niova izany ny Alarobia satria saika ny quadradradin'i Torkia isan'andro dia tokony ho efatra heny hatramin'ny 7,400 ka hatramin'ny 28,300.
Be loatra ny hopitaly ao amin'ny firenena, may ny mpiasa ara-pahasalamana ary ireo mpanenjika ny fifanarahana, izay notanana ho fitandremana ny valanaretina, dia sahirana amin'ny famoahana ireo fandefasana, hoy i Sebnem Korur Fincanci, izay mitarika ny fikambanana, tamin'ny The Associated Press.
Na dia napetraky ny minisitry ny fahasalamana aza ny tahan'ny trano fandriana ICU 70%, nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny Fikambanan'ny mpitsabo mpanampy be mpiorina ao Istanbul, efa ho feno ny fandriana fikarakarana be loatra ao amin'ny hopitalin'i Istanbul, miaraka amin'ny dokotera mikely aina mitady toerana ho an'ny marary marary mafy.
Misy ny tsy fahampiana mpitsabo mpanampy ary reraka ireo mpiasa mpitsabo mpanampy.
Ny fahafatesan'ny COVID-19 isan'andro ofisialy dia tsy nitsaha-nitombo ihany koa, nahatratra 13,373 182 tamin'ny sabotsy niaraka tamin'ny fahafatesan'ny olona XNUMX, ho famerenam-bola ho an'ny firenena izay noderaina noho ny fitantanana hitazomana ireo maty hatrany ambany. Saingy mbola miady hevitra ihany koa ireo isa firaketana ireo.
Ny ben'ny tanànan'i Istanbul Ekrem Imamoglu dia nilaza fa olona 186 no matin'ny areti-mifindra tao an-tanàna ny 22 novambra - andro iray izay nanambaran'ny governemanta fa fatin'ny 139 COVID-19 fotsiny no maty eraky ny firenena. Nilaza ihany koa ny ben'ny tanàna fa manodidina ny 450 ny fandevenana atao isan'andro ao an-tanàna misy 15 tapitrisa raha ampitahaina amin'ny salanisa 180-200 voarakitra tamin'ny Novambra tamin'ny taona lasa.
Nilaza i Koca fa mirongatra ny isan'ireo marary marary mafy ary maty ary milaza ny tanàna sasany izay misy an'i Istanbul sy Izmir fa miaina ny "tampon'izy ireo fahatelo". Hiandry mandritra ny tapa-bolana anefa i Torkia vao hahita ny valin'ny fiambenana amin'ny faran'ny herinandro sy ny fameperana hafa alohan'ny handinihana ny fanidiana mafy kokoa, hoy izy.
Mandritra izany fotoana izany, nifanaraka ny firenena fa handray dosia 50 tapitrisa amin'ny vaksininy novokarin'ny orinasa mpamokatra fanafody sinoa SinoVac ary manantena ny hanomboka hanome azy ireo amin'ny mpitsabo sy ireo marary efa-bolana. Eo ihany koa ny fifanakalozan-kevitra hividianana ny vaksininy novokarin'i Pfizer niara-niasa tamin'ny orinasa mpamokatra fanafody BioNTech. Vaksinim-pivoarana tiorka novolavolaina ho vonona hampiasaina amin'ny volana aprily.